Mbola Miady hevitra Ny Lafitsara Sy Ny Lafiratsin’ny “Halloween” i Tajikistana · Global Voices teny Malagasy
Mbola Miady hevitra Ny Lafitsara Sy Ny Lafiratsin'ny “Halloween” i Tajikistana
Voadika ny 27 Novambra 2014 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, čeština , polski, فارسی, українська, English
Tsy hitan'ireo mpitondra any Tajikistana izay lafiny mahafinaritra ny “Halloween”. Sary nalaina tao amin'ny Wikipedia.
Ny “Halloween”–fety izay ankavitsian'ny olona any Tajikistana no mba mankalaza azy–dia mbola arahan'ny fanjakan'i Azia Afovoany maso fatratra roa taona taorian'ny nipoahan'ny adihevitra voalohany nataon'ny olona momba ny mety ho fandraràna izany.
Tsy voararan'ny lalàna ny fankalazana io andro fialan-tsasatra io ao amin'ny repoblika, kanefa tamin'ny 25 Oktobra dia nidiran'ny mpitandro filaminana ny trano fandihizana malaza iray tao Dushanbe nandritra ny lanonana fanovàna endrika ary nobaikon'izy ireo ny mpitantana mba hampiato ny mozika, araka ny tatitra nataon'ny sampan-draharahan'ny RFE/RL Tajik. Avy eo dia nihazona olona nisary ho mpamosavy iray sy mpitsentsitra rà iray izy ireo hanontaniana mialohan'ny namotsorany azy roa.
Nilaza ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpitoraka bilaogy mpitahiry kokoa ny fomban-drazana fa fetin'ny “Tandrefana” ny “Halloween” ary mitarika ny fahapotehan'ny ny fiarahamonina Tajik. Na dia izany aza dia mizara roa ny tontolon'ny bilaogy Tajik: ao ireo mankasitraka ny fampiharana io fandraràna io, ary ao kosa ireo mahita fa tsy miteny izany.
Efa hatramin'ny 2012 ny fangatahana ara-môraly hampiatoana io andro fialan-tsasatra io. Notaterin'ny Global Voices ny tenin'ilay mpitoraka bilaogy iray, Bachai Sao, ny andro mialoha ny “Halloween”:
Tokony hampianarintsika ny taranaka maitso volo fa fomba vahiny ho an'ireo Tajik sy Silamo rehetra ny “Halloween”. Tsy tokony hankalaza ireo andro fialan-tsasatra vahiny mihitsy ireo zazalahy sy zazavavy Tajik manan-kambo ka tia ny tanindrazany.
Tamin'ny 2013, raha niseho ireo fisamborana voalohany mifandray amin'ny “Halloween”, dia nitanisa ny fanoheran'ny mpampiasa Twitter iray ireo fikasàna andrara ilay andro fialan-tsasatra ny Global Voices.
Miaina anatinà fanjakana Silamo ve isika sa ahoana? Niova ho mpitandro filaminan'ny fomba fisainana ve ny mpitandro filaminantsika?
Makotrokotroka ny adihevitra amin'ity taona ity ao amin'ny Blogiston.tj, sehatra fitorahana bilaogy iray vao misandratra ao amin'ny repoblika.
Tamin'ny 27 Oktobra dia izao no nosoratan'ny mpitoraka bilaogy Sitora Yusupova :
Fetin'ny Eoropeana ny “Halloween”, ary manjary lasa mahazatra antsika ny maka tahaka ireo soatoavina Tandrefana. Moa ve mba misy vahiny izay te-hankalaza ny “Navruz”-ntsika? Manimba ny toe-tsain'ny ankizy ny “Halloween”; matahotra ny ankizy rehefa mahita an'i Jack voatavo.
Ampian'i Yusupova fa tsy ny finoana Silamo ihany no mifangarika amin'ny “Halloween” fa ny finoana Kristiana Ortodoksa ihany koa:
Lazain'ireo Mullahs [mpitondra fivavahana] fa tsy misy ifandraisany amin'ny vahoaka Silamo ny fankalazana io andro fialan-tsasatra io satria tsy mifanaraka amin'ny singa takian'ny Kômitin'ny Vondrom-pivavahana Silamo any Tajikistana. Mifanohitra amin'ny fampianarana Silamo izany. Fanampin'izany, tsy manaiky io andro fialan-tsasatra io ihany koa ireo mpino Ortodoksa. Aorian'ny nanoratana ity lahatsoratra ity, afaka miantso ahy araka izay tianareo ianareo!
Nipetraka eo afovoany i Rustam Gulov, izay mampiantrano ny Blogiston.tj, tanatinà tsikera eo ambanin'ny lahatsoratr'i Yusupova:
Na dia manohana ny fanatontoloana aza aho, dia tena faly fa misy tanora [ toa an'i Yusupova ] izay te-hitahiry ny kolontsainy.
Saingy misy mpitoraka bilaogy ao amin'io sehatra io ihany, i Ovora, nanohitra ny faneriterena ataon'ny vahoaka tsy hankalaza ny “Halloween”.
Eny, tsy fetintsika ny “Halloween”, nefa inona moa ireo andro fialan-tsasatra tena antsika? Dimy amby roapolo taona lasa izay, tsy nanana Andron'ny Fahaleovantena, Andron'ny Lalàm-panorenana, Fetin'ny Tenim-pirenena isika. Zato taona lasa, tsy mba nanana Taom-baovao, 23 Febroary, 8 Martsa ary tsingerintaona isika. Nisy mihitsy aza ny fotoana tsy nananantsika andro fialan-tsasatra Silamo. Araka izany, iraisam-pirenenea avokoa ireo andro fialan-tsasatra rehetra, ary tsy marina ny fizarana ny fety ho “antsika” sy “an'ny hafa”.
Fehezin'i Ovora, fa raha mbola fanjakana laika i Tajikistana, dia manan-jo hankalaza na tsy hankalaza ny andro fialan-tsasatra iray ny olona tsirairay.
Tsy voafetra amin'ny fankanesana any amin'ny moske sy ny fivavahana in-dimy isan'andro ihany ny fiainantsika – tsy fanjakana Silamo i Tajikistana. Te-hanana fialamboly ny vahoakantsika ary natao ho amin'izany indrindra ny “Halloween”- fomba fanarian-dia handaniana andro miaraka amin'ny hafa izay tsy ampy lanonana fanovàna endrika sy hetsika misy lohahevitra. Tsy ny fankalazana na tsia ny “Halloween” no mampihena ny elanelana eo amin'ny olona sy i Allah.
N.B. Farrukh Umari no nanao ny fandikàna avy amin'ny fiteny Tajik.